Mpanafatra toeram-piofanana mpanafatra Madrid miaraka amin'ny mpamily Mpanafatra toeram-piofanana mpanafatra Madrid miaraka amin'ny mpamily
Sticky Post By frander Posted in Fanofana fiara Permalink
Ankafizo ny toerana tsara indrindra amin'ny herinandro Masina ho avy aty amin'ny fiara fitaterana maoderina indrindra
Sticky Post By frander On 19 / 01 / 2019
Manomàna bus ho an'ny Paka any Madrid
Manofa bus amin'ny herinandro masina; satria fotoam-fampieritreretana sy fanavaozana ny finoana kristianina, maro ireo mpiangona izay maka androany ho any manatona toerana samy hafa lehibe izay ho an'ny Katolika, fa mamerina ny maro ny olona handray herinandro ity mba handeha ho mandeha, Mahafantatra sy mankafy ireo zava-mahatalanjona izay omen'ny faritra misy azy ireo.
Torres Bus dia mamela anao hahalala ny toerana manan-danja indrindra ary atolotra anao hankamin'ny herinandro Masina tsy hay hadinoina ao Madrid.
MITADY ANAO HANANA BASOA HANOMPO ANAO ANAO MADAGASIKARA AMINTSIKA MALAGASY SY MANDRAKIZAY MOMBA NY MIRALENTA EO AMIN'ITY TANJAKA EOZAN'ANDRO:
TOLEDO: Ity faritra ity dia mety ho tonga lafatra tonga lafatra hahafahanao mankafy ny Paka; Io faritra io dia nambarana ho tranokalan'ny tombontsoan'ny mpizaha tany iraisam-pirenena. Toledo dia manana mari-pamantarana ara-javakanto sy ara-tantara mahafinaritra izay manan-danja tokoa ho an'ny tompony sy ny mpitsidika; dia manasongadina ny fankalazana ny fahafatesana sy ny fitiavan'i Jesoa Kristy any Castile noho ny fahaiza-manaon'ireo rahalahy; mba hanatanterahana ny fizotran'ireny sary masina ireny amin'ny alàlan'ny arabe midadasika ao amin'ny ivontoerana manan-tantara ao amin'ity sehatra ity.
SEVILLA (ANDALUCÍA); Ny fetin'ny herinandro masina dia ankalazaina sy hajaina amin'ity faritra Eoropeana ity; Mandritra ny Zoma alahelony hatramin'ny Alatsinan'ny Paska, dia miseho ny fisehoana maro momba ny fivavahana. Maro ireo olona izay manatrika ireo asa mahazatra sy mihetsiketsika.
Herinandro Masina in Seville efa nanambara ny fizahan-tany iraisam-pirenena mahaliana noho ny mahavariana filaharana, mpivalo, mozika nanao imbetsaka ny Saetas avy amin'ny lavarangana ary ihany koa indrindra alina manokana rehetra fantatra amin'ny hoe "tany am-boalohany vorona" natao teo anelanelan'ny alakamisy natao sy Zoma tsara iny, dia atrehin'ireo mpiangona maromaro maromaro izay miala amin'ny firahalahiana mangina amin'ny an'ny gypsies.
Murcia: Ireo fety ara-pivavahana tao Murcia dia natao teo anelanelan'ny Zoma sy ny Paska Alahady; ny fankalazana ny Paka ao amin'io faritra io Tena mahaliana noho ny lova sculptural lehibe, dia nitsidika ihany koa amin'izao fotoana ny fomba tsara rehefa mampianatra asa ara-pivavahana eo dia izao: ny brotherhoods manaraka ny fomba fahanginana, hampiharihary ny tarehy atao hoe Nazarena niteraka tabataba be ihany koa ny manasongadina ny filaharana ny Masina Kristy ho famelan-keloka.
Manokàna bisy foana mandritra ny herinandro masina any Madrid dia mitondra any amin'ny toerana hafa izay tsy azonao atao hitsidihana ny Paska:
Ny herinandro masina dia manodidina ny zoro. Amin'ity taona ity ny 9 dia hanomboka amin'ny volana Aprily (Palm Sunday) ary ny 15 dia hifarana amin'ny volana Aprily (Sabotsy masina); ary satria fantatry ny rehetra, angamba, izany dia ahitana ny fankalazana kristiana sy ny andro manetriketrika ny Alakamisy Masina (Alakamisy Masina) sy ny Zoma Tsara (Zoma Tsara).
Ireo olona izay mandray anjara amin'ny fitokanana herinandro masina dia mitafy "capirote" nentim-paharazana - ny satroka avo be izay mandrakotra ny endrik'izy ireo, ary koa ny lokony amin'ny fehikibo.
Aza mieritreritra bebe kokoa momba ny fanofana bus iray ho an'ny Paska any Madrid, aza manahy ny amin'ny fitondrana !!
Raha manaraka ireo paradisa fanao mahatalanjona mahatalanjona sy mahafinaritra indrindra ianao, dia aza manalavitra lavitra an'i Andalusia, indrindra ireo tanànan'i Seville sy Malaga. Etsy ankilany kosa, ny fankalazana ao Castile no malaza ho maizina kokoa, ary ny sasany dia milaza fa ny fahatsiarovana tena izy amin'ny herinandro Masina. Zamora, Salamanca ary Valladolid dia manolotra fankalazana mahazatra indrindra amin'ny herinandro masina amin'ity faritra ity.
Raha mitranga izany dia miditra ianao Madrid amin'ny daty ary maniry ny handeha amim-pilaminana sy amim-pilaminana; any amin'ireo tanàna voalaza etsy ambony, ny fifandraisana torresbus.es; raha vao azo atao ary manorata ny fiaranao sy ny mpamily anao. Manana fiara, minivans, minibuses sy ny fiara fitaterana amin'ny afaka 7 - 16 - 25 - 35 - 50 - 54 sy 70 mpandeha modely; miaraka amin'i Mercedes Benz, Iveco sy Scania, ary mikarakara ny zava-drehetra isika; mba hahafahanao miala sasatra sy mankafy ny fijanonanao any Espaina.
Happy Holy Week !!!
Ireo teboka mifandray aminay:
Phone: + 34607237225
Fantatrao fa mora amin'ny #torresbus ny fanofana bus iray ho an'ny Paka eto Madrid
Ankafizo ny toerana tsara indrindra amin'ny herinandro Masina ho avy aty amin'ny fiara fitaterana maoderina indrindra Martsa 15th, 2019frander
Sticky Post By Azucena Posted in Rent Microbus, Rent Minibus, Fanofana fiara, Fanofana fiara Permalink
Mividiana bisy iray ho an'ny fiaraha-misakafo atoandro
Sticky Post By Azucena On 10 / 12 / 2018
Mitady orinasa fiara fitaterana an'habakabaka ve ianao hitaterana namana, mpiara-miasa na namana ho an'ny sakafo hariva? Manofa bisy ho an'ny sakafo hariva, tsara izany
Manomboka amin'ny daty ny daty fiaraha-misakafo amin'ny orinasa Noely. Koa raha mitady ny orinasa izay lehibe sy ofisialy, izay matoky ny handidiako ny fanompoana toy izany endri-javatra, dia afaka matoky tanteraka isika, Torres Bus.
Fantatsika ny fomba tsara hanatanterahana ny fifindrana, na fotoana fohy na lava na feno amin'ny mpanjifa izany. Manaraka ny baiko isika, amin'ny karazana fanompoana rehetra ary amin'ny fepetra takian'ny mpanjifantsika.
Christmas dinner? Bisy na minibus? manofa bus iray ho an'ny sakafo hariva - minibus
Rehefa mitady ny fitaterana, hamono anao mpiasa, afa-tsy nijery ny tena tanjona, dia tokony manakarama orinasa fanta-daza ka dia samy aina toa anao.
Ny zavatra manaraka tokony hoeritreretinao sy hitanao dia ny isan'ireo olona handeha hifindra; miankina amin'io tarehimarika io, ianao dia mila a minibus Raha vitsy izy ireo ary raha maro loatra ny olona, ​​dia sokafy izay mampiasa ny bisy.
Raha mihoatra ny habetsaky ny fibodoana ny iray, dia tsy maintsy ampidirinao ny fampiasana bus na fiaramanidina iray hafa entina haka ny vahiny ary hanana ny famindrana ny anao Christmas dinner ho lavorary.
manofa bus ho an'ny sakafo hariva Christmas, microbus Inona no sokajy misy ao rehefa misafidy fiara fitaterana Krismasy?
Raha vao fantatrao ny toerana tokony hifindra ho any amin'ny Noely sakafo, ny zavatra manaraka tokony hahafantatra ka tafiditra ao ny mifidy ny bisy / Ses na microbus / Ses tianao.
Izahay ao amin'ny Bus Torres, dia misy karazana fiara fitateram-bary roa sy minibus ho an'ny sakafo hariva amin'ny Krismasy.
Ny molotra na ny mahazatra.
Ny VIP no fanompoana izay amin'ny fanompoana lafo vidy, amin'ny hoditra Karakarao tsara, vata fampangatsiahana hitandrina sakafo nandritra ny famindrana mangatsiaka, USB izay afaka Mampianiana finday, mampifandray mozika ny mozika sy ny mpilalao kosa, ho afaka ihany koa ny hametraka sarimihetsika, raha ny fanompoana takiana.
Ary ny fiara fitaterana normal, izay manana rafitra tsy dia tsara, miaraka amin'ny tsy fahampian'ny teknôlôjia sy tsotra.
Na inona na inona tianareo na ny antony itiavanareo, dia aza adino ny mandefa anay ny teti-bola na amin'ny fomba iray -tseraseraAmin'ny alalan'ny ny tranonkala raha tsy izany an-telefaonina ao amin'ny + 34 607 372 252, amin'ny lafiny iray hafa, raha tianao mailaka anay amin'ny info@torresbus.es.
Lazao anay ny vaovao rehetra ho anao Christmas dinner, manondro fandaharam-potoana sy toeran'ny famoriam-bola ary vokatr'izany dia handefa ny vidin'ny vidiny isika.
Torres Bus, orinasan-kevitra idealy anao mba handefa ny famindranao ny anao Christmas dinner.
manofa bus iray ho an'ny sakafo hariva Christmas - minibus
Mividiana bisy iray ho an'ny fiaraha-misakafo atoandro January 19th, 2019Azucena
Fandefasana bus 30: ohatrinona ny sarany?
Sticky Post By Fampiofanana mpampiofana On 02 / 12 / 2018
Saran'ny toeran'ny bisy 30 ny vidin'ny bisy: ohatrinona ny vidiny - minibus minibus
Saran'ny vidin'ny 30 fiara fitadiavam-bidy
Ny vidin'ny vidin'ny Bus ✅ 30, ny zavatra voalohany tianao ho fantatra dia ny vola be. ⭐️ Antsoy izahay ary mangataha sarany fampandehanana minibus Luxury any Madrid
Raha mieritreritra ny hividy ianao Toby Bus 30, ny zavatra voalohany tianareo hahafantarana dia ny halalin'ny sarany. Na izany aza, na firy na firy ianao no mikaroka amin'ny Google, dia tsy misy angona azo ampiasaina, satria ny vidin'ny 30 toeram-ponenana fiara, Mazava ho azy izany, ary miankina amin'ny fanompoana izay hatao.
Ny orinasa misy ifandraisanao, manondro ny rent rent miniautobus 30 seza, Hangataka amina angon-drakitra maromaro ianao, toy ny isan'ireo mpandeha, ny toerana hanaovana ny dia ary ny faharetan'ny dia, ary hiorina amin'io fampahalalam-baovao io, izay hanomezana anao amin'ny teny iray.
Fivarotana fiara fitaterana 30 - mini bus
Ny fitsangatsanganana vetivety sy ny tolotra amin'ny fotoana fohy dia hanana vidiny sarobidy kokoa, fa raha mila izany ianao Manofà efamira 30 bisy Ho an'ny fitsangantsanganana ora maromaro, na ho any lavitra lavitra ny toerana niaviany, dia ho avo kokoa ny fandaniana.
Amin'ity tranga ity dia tsy ny halavirana izay tsy maintsy raisina, fa koa ny isan'ireo mpandeha, satria, raha ny isan'ny mpandeha dia akaiky ny fahafaha-maivana indrindra, dia mety tsy ny hevitra tsara indrindra ny manakarama mpandeha. Toby Bus 30. Ny dia lava dia miteraka herim-po, ary amin'izany tranga izany dia mety ho mora kokoa ny manofa fiara fitateram-bahoaka miaraka amin'ny seza maromaro kokoa ary ho azo antoka fa tonga any amin'ny toerana hahatongavany any amin'ny toerana mahafinaritra sy vaovao.
Fivarotana fiara fitateram-bahoaka 30 - minibus malaza ho an'ny Madrid transfer transfer
Raha mila fanampiana ianao 30 toeram-ponenana bus na manofana minibus any Madrid; Afaka mifandray Torres Bus, amin'ny finday + 34 607372252 na e-mail: info@torresbus.es, mivaingana eo amin'ny tsena ny fitaterana mpandeha 60 ela niainana, natambatra kalitao fanompoana izao tena fifaninanana vidiny, manolotra ny tsara indrindra sarobidy izy ireo dia afaka mahita eo an-tsena.
Fandefasana bus 30: ohatrinona ny sarany? Desambra 3rd, 2018Fampiofanana mpampiofana
Afaka manofa bus ianao raha tsy misy mpamily any Madrid renivohitra
Sticky Post By Fampiofanana mpampiofana On 01 / 12 / 2018
Afaka manofa bisikileta ve aho fa tsy mpamily?
Ao amin'ny orinasa Torresbus, izahay dia manolotra bus malalaka, minibus, minibus ary minivans. Mba hahatratrarantsika izany dia ampifanarahantsika amin'ny zavatra ilain'ny mpanjifantsika ny mangataka sy ny faniriany, ny fampakaram-bady, ny fampakaram-bady, ny fitsangatsanganana na ny zava-mitranga izay te hanao.
Any Espaina, araka ny lalàna, voarara ny manofa bisy, mpanazatra na microbus tsy misy mpamily na mpamily, izany no antony anolorantsika ny tolotrasa ho an'ny karazam-jatony isan-karazany, ao amin'ny orinasa izay azonareo atao,
Afaka manofa bisikileta ianao raha tsy misy mpamily
Manolotra karazana fiara 2 izahay, ireo malaza na koa antsoina hoe mahazatra na ireo sokajy vip.
Raha liana ianao ary te hahafantatra raha afaka manofa bus ianao raha tsy misy mpamily. Mifandraisa aminay amin'ny alàlan'ny telefaona na 24 ora, amin'ny alàlan'ny whatsaap na mailaka.
Aiza no hanofana bus tsy misy mpamily any Madrid?
Ny laharanay sy ny laharan-telefaona dia + 34 607 372 252 ary ny adiresy mailaka dia info@torresbus.es
Torresbus, tompon'andraikitra amin'ny fanatanterahana ny nofinao sy ny zavatra ilainao. Na inona na inona no ilainao, eto dia manana izany miaraka aminay ianao; satria, raha mila izany ianao manofa bus tsy misy mpamily; tsy hahita izany; Ny lalàna dia tsy azo avela hanofa mihoatra ny seza 9 tsy misy mpamily.
Ny vidiny tsara indrindra; ny fanompoana tsara indrindra, ireo mpamily tsara indrindra. Manana izany miaraka aminareo izahay, ny orinasanareo Fandefasana bus any Madrid ary toledo.
Satria ny zava-dehibe indrindra, ho antsika mpanjifa sahirana sy miaraka amin'ireo tolotra ataontsika, dia hita taratra mazava tsara; Ny ohatra tsara indrindra amin'ny fomba tsara ataontsika dia ny valin'ny mpanjifantsika rehetra.
Ahoana ny fomba fametrahana ireo fanombanana ireo vao haingana
Hoy i Sara:
Fitsaboana mahafinaritra, fisehoan-javatra ary mpanampy maimaim-poana, fiara fitondra-tena tsara sy mahafa-po amin'ny fotoana rehetra, tamin'ny fotoana nangatahanay azy; manana birao fiarovana sy fahitalavitra handeha hiaraka amin'ny ankizy miaina.
Mahafinaritra ary mahita anao haingana
na ity fijerena hafa momba ny orinasa lalàna ity
Tolotra tsara, serivisy serivisy, fitsaboana tsara, fifaninanana, kintana 5, serivisy kalita, pikan-tsafidy ary ny fikarakarana manokana.
Fidio ny bisy tianao, ny iray izay mifanandrify indrindra amin'ny zavatra ilainao ary miantso anay amin'ny iray amin'ireo dokambarotra manoloana anao mikasika izay mety indrindra ho an'ny vondrona misy anao sy ny fanofana bisy.
Afaka manofa bus ianao raha tsy misy mpamily any Madrid renivohitra Desambra 2nd, 2018Fampiofanana mpampiofana
Sticky Post By Fampiofanana mpampiofana Posted in Rent Minibus Permalink
7-15-20-30-40-50 fitrandrahana firy ny isan'ny manana mikroba?
Manana karazam-bolo maro samihafa isika; 7-15-20-30-40-50 seza mila minibus ho an'ny toerana maromaro? Manoro hevitra anao izahay momba ny karazam-pitaterana madinika izay mifanaraka amin'ny zavatra ilainao; ny minibus rent Izy ireo dia natao hametrahana toerana marobe, ho an'ny famindrana manodidina ny tanàna, Barajas transfers na angamba ho an'ny fitsangatsanganana ao amin'ny vondrom-piarahamonin'i Madrid.
Azonao atao ny manofa ny minibus miaraka amin'ny mpamily, noho ny ora na ny andro ilainao, dia manitsy ny zavatra ilainareo izahay ary manome anao ny serivisy mila entinao ny vahiny.
seza Minibus 30 seza
Haneho anao izahay kamiaony mpandeha mpandeha 20, Mercedes Benz miaraka amin'ny toerana mipetraka ary ny horonan-tsarimihetsika, raha mihira ny hira; Eny eny, raha sendra misy trangam-piaramanidina dia tsy maintsy manao ny fiantohana ara-dalàna ianao, ary mety tsara.
Avy eto dia voatery manao izany izy ireo rehefa mijery azy ary avy eo kely izay mahatonga anao ho toy izany ary avy eo ary izany dia tsy hitanao izany
Azonao atao ny miantso antsika amin'ny finday 607372252, ao amin'io finday io no hikarakaranao ary raha te-hiditra amin'izany ianao van de 20 mpandeha Tokony hiantso an'io isa io ianao ary mangataha fepetra ho an'ny serivisinao na fitsangatsanganana izay ilainao ary izany no fomba amaranao ny dianao tsy misy fanoloran-tena.
Minibus avy amin'ny seza 20 ho an'ny serivisy fampitaovana
Ho an'ireo namana sasantsasany avy any Meksika, hampiseho aminao ny fomba hanatanterahan'ilay tarika, hanombohana ny dianao sy ny fomba ahafahantsika manatona ilay tarika, amin'ny fomba tena azo antoka amin'ireo mpamily izay ampianarina tanteraka; inona ny entana entinay handefasana anareo ho any amin'ny dianareo?
Saingy ny fiara kely miaraka amin'ny seza, dia ho tonga, raha azontsika afina ilay fiara izay ho avy, amin'izao fotoana izao Sergio tonga, izay iray amin'ny piadiana mpamily ny sehatra, Angel izay manampy antsika hametraka ny entana ao anaty vombom-bidy sy mpandeha mba ho akaikintsika mandra-panokafany ny varavarana ary hametraka antsika.
Ny seza 15 minibus ho an'ny tarika madinika
Ny fanantenako, fa manana dihy goavana miaraka aminay ianareo, ho hitanay ny fomba hanatonan'izy ireo ny efitranom-bala 15; Rehefa mahita ireo minibus dia mahatsapa ho mahafa-po azy ireo, manana lanjany sy karazany maro izahay, ka afaka mitondra entana maro samihafa izy ireo ary afaka mitazona ny entana na ny minibus an'ny seza 30.
7 seza seza madinika
Seza minibus January 7th, 2019Fampiofanana mpampiofana
Famandrihana bisy toerana 12
Sticky Post By Fampiofanana mpampiofana On 18 / 11 / 2018
Bisy famandrihana bus 12 ao Madrid amin'ny dia
Lokan'ny birao miendrika 12 ao Madrid
Ny minibus dia fitaovam-pitaterana tsara indrindra, hanosika vondron'olona vitsivitsy, haingana sy azo antoka.
Amin'izany fomba izany, ny Famandrihana bisy toerana 12 Safidy mahery vaika tokoa ho an'ny vondrona izay te-hifindra any an-tanàn-dehibe ao an-tanàna, hanao fitsangatsanganana na manana fiara tsotra, tonga lafatra ho an'ny dia lavitra eo amin'ny seranam-piaramanidina sy ny tanànan'i Madrid.
Ny ankamaroan'ny orinasa izay manolotra an'ity serivisy ity, dia mahazatra toy ny mpamily iray matihanina. ny manofa bus avy amin'ny kianja 12 Amin'ny mpamily dia azonao antoka fa mijanona eo an-tanan'ny manam-pahaizana iray ilay fiara, miaraka amin'ny kilaometatra maro ankoatry ny kodiarana.
Amin'izany fomba izany dia mandeha maimaim-poana ny mpandeha, miaraka amina fampiononana feno. Ny ahiahy ateraky ny toetoetry ny fifamoivoizana na ny fikarakarana fiara dia avela ho an'ny Famandrihana bisy toerana 12.
Ankoatra izany, ity fahatsapana fahatoniana ity dia manampy ihany koa ireo fiara ireo, na dia kely aza, dia manana antoka rehetra momba ny fiarovana, ary koa ny fandrosoana farany amin'ny fialamboly.
Ho an'ireny hevitra tsara ireny dia nanampy koa ny zava-misy Rentrée de minibusbus 12 chèques Mety ho tena ara-toekarena izany, ka mahatonga azy io ho fitaovam-pitaterana mafonja amin'ny resaka vidiny.
Raha mijery ianao manofa microbus misy seza 12 ary mila fanazavana misimisy kokoa ianao, afaka mifandray hatrany amin'ny orinasa toy ny Torres Bus, izay ahafahan'ireo mpiasa mahay anao hitari-dalana anao, amin'ny karazam-pitaterana ambany indrindra izay ilainao, 12, 16, 19, 25, 35, 50, 55 ary 70, manoro hevitra ny hahazo safidy tsara foana.
Aza misalasala intsony àry, ny Famandrihana bisy toerana 12 Manana ny zavatra rehetra tadiavinao izy.
Famandrihana bisy toerana 12 November 18th, 2018Fampiofanana mpampiofana
Fandefasana fiarakaretsaka miaraka amin'ny mpamily
Sticky Post By Fampiofanana mpampiofana On 17 / 11 / 2018
Fandefasana bus amin'ny mpamily fiarakaretsaka ao Madrid ho an'ny antoko bakalorea
Ao amin'ny orinasa bisy (Torres Bus SL) nataonay ny famindrana sy ny tolotr'izy ireo miaraka amin'ny mpamily, raha ianao. manontany anay amin'ny Famindrana bus amin'ny mpamily, dia voatery isika hanao, saingy tsy misy mpitarika, tsy afaka isika, satria ny orinasantsika dia natokana ho an'ny fitateran'ireo mpandeha miaraka amin'ny mpamily, ary izany dia mety ho tsy mety ho antsika satria ny lalàna sy ny lalàna dia orinasa iray Famindrana bus amin'ny mpamily o mpamily tsy afaka manofa bus na bisy, raha mbola manana fahazoan-dàlana manokana ny orinasa, fa raha manana fahazoan-dàlana manokana izay tsy afaka mitondra mpandeha.
Fiofana fiara amin'ny mpamily any Madrid
Ny orinasa Fiofana fiara amin'ny mpamily any Madrid, izahay no ora 24, vonona sy azo alaina amin'ny karazana serivisy tadiavinareo, afaka mangataka famelabelarana amin'ny antso an-tariby ianao, amin'ny + 34 607 372 252, amin'ny alàlan'ny e-mail ao info@torresbus.es na mameno teny Ho faly hanampy anareo izahay
Ny orinasanay dia mitaingina mihoatra ny fitsidihan'i 600 manerana an'i Espana isan-taona, mitsidika ny toerana rehetra angatahin'ny mpanjifanay, manana ihany koa ny fidirana amin'ireo toerana izay tsy azonareo an-tsaina, mba hanamorana ny dia ary indrindra ny mamela azy ireo amin'ny teboka iray ihany toerana.
Taorian'ny taona lava sy 45 nanoloana ny fitateran'ireo mpandeha, dia navaozina hatrany izahay, ary manolotra foana ny toerana mahafinaritra indrindra any an-tanàna izay tiany hotsidihana.
Ny zavatra niainantsika nandritra ny taona maro dia nilaza izany fa tsy izany ihany, fa koa ny mpanjifantsika, izay niarahaba antsika noho ny fanampiana nomena.
Fanofana fiara amin'ny mpamily ho an'ny antoko bachelor
Ny iray amin'ireo tolotra nangatahana indrindra dia ny Fanofana fiara amin'ny mpamily ho an'ny antoko bachelorNahoana?, Satria ny mpanjifa te hankafy, malefaka noho ny teti-bola, ny mpanjifa dia afaka mankafy ny malaza alina,), foana noho ny fanampian'ny Torres Bus, satria mahazo nifandray foana miaraka amin'ny mpanjifa, hahitana raha mifanaraka amin'ny zavatra nangatahinay sy ny vidiny ny teti-bola
Fandefasana fiara fitateram-bahoaka amin'ny serivisy famindrana fiara fitaterana adolfo suarez madrid barajas
Ny iray amin'ireo zavatra tena tsara tarehy indrindra dia ny Fandefasana fiarakaretsaka miaraka amin'ny mpamily Fandefasana seranam-piaramanidina adolfo suarez madrid barajas, satria io no fomba tsotra sy mahafa-po indrindra hanatanterahana ny famindrana ny vondrona lehibe any amin'ny faritry ny adolfo suarez madrid barajas
Ao Torresbus dia hahita fiaramanidina maotera maoderina sy azo antoka ary manana traikefa amin'ny fitondrana ireo fiara ireo.
Mba hitaterana ireo vahiny any amin'ny hetsika ara-tsosialy, amin'ny fampakaram-bady sy ny batisa ho any amin'ny fety fikarakaranao, na ho an'ny orinasanao, dia handefasana ireo fihaonambe sy fihaonambe na fizahantany fizahantany amin'ny Madrid sy ny alteradores. Mba hangatahana fehezanteny dia tsy maintsy miantso antsika amin'ny nomeraon-telefaona fotsiny ianao + 34 607 372 252 na fenoy ireto manaraka ireto contact form
Mpanazatra fiara amin'ny mpamily
Manao sonia bisy mpandeha
Ireo toetra mampiavaka ny mpamily antsika matihanina:
Maro ny olona mitondra fiainana, fa ny zava-misy amin'ny fandaniana ny fiainany mitondra fiara na mitondra fiara dia tsy manamboatra azy ireny fa miankina amin'ny toe-tsaina, ny fahafahana mitondra fiara Ampahany amin'ny asa fotsiny izany, mitaky fitsaràna tsara, famaizana sy fahatsiarovan-tena momba ny fiarovana izay, amin'ny ankapobeny, ny mpamily matihanina ity fanairana ity, dia mitandrina, manam-paharetana ary mihevitra, (raha toa ka tsy nanamafy ireo fihetsika ireo ianao, dia ho tonga trangan-javatra mety hitranga izany)
Fanofana fiara amin'ny mpamily ho an'ny fitsangantsanganana
Ny fanaraha-maso ny fiara fitaterana alohan'ny hanombohana ny dia manomboka dieny mialoha ny handehanana eny an-dalana, hitondra fiarovana.
Ny tena matihanina dia manara-maso ny fepetran'ny fiara fitaterana ary manamarina fa tsara ny bisy, na inona ny karazana bus mitondra anao, ny fanaraha-maso alohan'ny hanombohana ny dia, no sehatra voalohany fiarovana;
Amin'ny maha-mpamily anao, dia miaro ny tsy fivadihana amin'ny voalohany ianao, isaky ny mijery ilay motera ianao dia tokony hitazona ny fatoranao eo ambanin'ny bokotra ny akanjonao, satria mety ho voafandrik'izy ireo eo amin'ny basy ary hampisy loza:
Fanadihadiana ara-tsaina momba ny lalana; Voalohany indrindra amin'ny mpamily, manaova dia an-tongotra amin'ny dianao, amin'ny fijerena ireo hetsika tsy ampoizina mety ho hita eny an-dalana, toy ny tsy fisian'ny fiara fitondra-tena, ny hazavana voajanahary sy artificielle; ny fahazavana voajanahary izay tetikasa antsika ny masoandro, dia tsara indrindra ny tsy mampiasa ny visor efitra lamba na Mitovy amin'ilay family mbola maizina, en cas de solon-fahazavana, izay kasaina ny fiara hafa, tokony hofadina lasa miadana kokoa sy mitodika any amin'ny faran'ny lalana;
Raha tsy manao izany isika dia hijaly noho ny fahiratan-tsaintsika; mandritra ny 7 segondra amin'ny haavon'ny kilometatra 95 isaky ny ora ny bus dia manakaiky ny 185 metatra, raha tsy misy ny mpamily maneho ny lalana; sy ny toetrandro, orana, orana, ranomandry, havandra, rivotra mahery;
Na izany na tsy izany, eto ny toerana tokony hijeran'ny mpamily amin'ny fiara fitondra; dia fantatsika ny fomba hisorohana ny loza, dia ny fampiharana ny fahalalana ny miaro mitondra fiara sy ny fanohanana ny rafitra braking, ny fiara fitateram-bahoaka dia manana rafitra antilock ABS, dia tokony hahafantatra ny fomba fiasan'izy, fa indrindra ny ny toetra, io rafitra io dia manome ny Ny mpamily fiara lehibe kokoa noho ny famelany ny fiara fitaterana, raha tsy voasakana ny kodiarana, ka mihena ny haingam-pifamoivoizana sy ny halaviran-dalana, na izany aza;
Tsy maintsy manitsy ny fepetra henjana izy ary mametra ny fetran'ny hafainganam-pandeha; Ara-dalàna ny misoroka ny fampiasana ny retarder amin'ny ala maina, satria izy io dia toy ny fihoaram-pefy, miaraka amin'ireo kodiarana mandroso ary mihazakazaka ny mety hisian'ny fikoropahana na ny fametahana kodiarana.
Fanofana fiaramanidina miaraka amin'ny mpamily ho an'ny fitsangantsanganana
Bad lalana tsy nidika, zara raha vita, teny an-dalana kilometatra eto ambany no sarotra indrindra kilometatra ary raha an-dalana na ny lalana any mahantra toe-javatra, fa ny toe-javatra ireo, ary azo ampiharina fahalalana teorika dia ampiharina, azony in ny fianarana fiofanana momba ny fiarovana eny an-dalambe nampianarin'ny orinasa
Ary raha ny lalana ao amin'ny toe-javatra ratsy slows ary mbola mailo na inona na inona azon hetsika izay ho hita ao amin'ny làlan na ny oncoming làlan, manamarika fa ny fomba fijery, dia tokony hanao toy ny radara, manjakazaka rehetra the angles; Amin'ireny fepetra ireny, ny fiara iray eo amin'ny lalana mifanohitra, mba hisorohana ny sakana, dia afaka manamboatra tampoka tampoka, ary manafika ny lalantsika;
Ampiharo mialoha ny mialoha, na izany karazana tranga izay mety hitranga aminao amin'ny dingana rehetra, na dia fohy aza izany; Eny na dia teo aza nandray fepetra, dia tafiditra ao anatin'ny toe-javatra sarotra, hampihatra ny didim-pitsarana sy ny rariny ary manapa-kevitra ny fotoana inona no dingana mba hitondra mba tsy ny fahadisoan'ny hafa, ary dia toy izany fa tsy ho tonga niharan'ny loza dia ataovy Ny fampiasanao ny fahaizanao amin'ny lalana na lalana, toy ny mpamily matihanina, dia tsy maintsy manitsy tanteraka ny fanaraha-maso ny fiaranay, ary manatanteraka ny baikon'ny fanatanterahana.
Fandefasana fiara fitateram-bahoaka miaraka amin'ny mpamily hitondra fitaterana
Fandefasana fiarakaretsaka miaraka amin'ny mpamily November 18th, 2018Fampiofanana mpampiofana
fanofana mpanazatra: Fikambanana matoky anareo any Madrid izahay
Sticky Post By Fampiofanana mpampiofana On 17 / 07 / 2018
Fandefasana fiara fitateram-bahoaka amin'ny Bus Towers
El fanofana mpanazatra Ny orinasanay dia iray amin'ireo vahaolana amin'ny karazam-pahafahana rehetra toy ny:
- Fanatitra ny seranam-piaramanidina.
Ianao -Weddings; Bachelors and bachelorette parties.
ary ireo tolotra maro hafa azo raisina ho an'ireo mpanjifa taloha sy vaovao.
Ao amin'ny Bus Torres ny fanofana mpanazatra Fomba hankafizana isan'andro izany satria manana fiaramanidina efa milefitra sy mahazatra izahay ary mandritra ny dia lavitra sy fohy.
Ahoana ny fanononan'ny mpanazatra ao amin'ny orinasa misy antsika?
Izahay dia orinasanao
Ao amin'ny Bus Torres, manome ny mpanjifanay, araka izay azo atao, miaraka amin'ny fiara fitateram-bahiny izahay Madrid na in Toledo; Manana tolotra fanompoana mpanjifa isika manokana mba hanampy anao hamaha ny fisalasalana rehetra anananao amin'ny fotoana manofa bus na bisy.
Ny laharam-pahamehana dia ny mpanjifanay, toy ny anao sy ireo zokiny indrindra, dia faly amin'ny serivisy.
Ny iray amin'ireo toetra maro atrehan'ny orinasa; ny fizotry ny teti-bola momba ny tolotra omenao.
Ny karaman'ny mpanazatra: Ahoana ny fomba fiasa?
Ny dingan'ny fanofana serivisy amin'ny bus iray dia manomboka rehefa ianao, na olon-kafa, mandefa anay teti-bola amin'ny alàlan'ny mailaka amin'ny adiresy info@torresbus.es; amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ny rohy manaraka fanofana mpanazatra, na amin'ny finday amin'ny nomeraon-telefaona + 34 607 372 252.
Rehefa avy ny nanontany; ny raharaham-barotra manomboka amin'ny fanombanana ny diany (matetika, ny raharaham-barotra, mahazo mifandray amin'ny mpanjifa ny soso-kevitra iray hafa pickup na hazavao raha sarotra ny lalana fidirana, Avenue, toeram-pambolena ... ) hoe nahoana no zava-dehibe ny namelany anay ho nisy fifandraisana an-tariby na mailaka.
Raha vao vita ny teti-bola, dia hahazo ao amin'ny mailaka; raha toa ka mila ny hanazava izay fanontaniana akory va raharahanay izao, dia hanana mandrakariva hita am-pototry ny namany Sary finday mifandray amin'ny varotra.
Inona no bisy azoko entina hanofana?
Manana fiaramanidina maherin'ny 15 buses, coaches, minibuses ary minibus isika; izay mametraka ny isan-karazany araka ny karazam-panompoana azonao, toy ny:
Bus 70 seza ao Madrid: Izy ireo dia nangataka manokana fitsangantsanganana ny vondrona lehibe, fampakaram-bady, nafindra avy any amin'ny seranam-piaramanidina mankany Madrid na tanàna hafa.
Mpanazatra avy amin'ny 40 mankany amin'ny seza 56 ho an'i Madrid: Ity karazana fiara ity dia iray amin'ireo mahazatra indrindra ho an'ny vondrona lehibe; Matetika koa izy no manofain'ny orinasa ho an'ny mpiasa.
Mikrobo avy amin'ny 25 mankany amin'ny kianja 39 ao an-tanànan'i Madrid: Ny karazana asa fanompoana nomena ity fiara ity; Matetika ny fitaterana ny mpandeha amin'ny lalana, toy ny: Madrid - Adolfo Suarez Madrid Barajas; toeram-piompiana; Excurisones; Company dinners; fianakaviana ...
Minibus 12 mankany amin'ny seza 19 ao Madrid Capital: Io dia iray amin'ireo tolotra tadiavin'ny vondrona madinika; mpihira; mpanakanto; masoivoho; mpandraharaha ary fianakaviana madinika.
fanofana mpanazatra: Fikambanana matoky anareo any Madrid izahay Jolay 17th, 2018Fampiofanana mpampiofana
Ny toerana 5 tsara indrindra mba hitsidika an'i Espaina!
Ny fitadiavana ny toerana tonga lafatra raha te hanao ny fizahan-tany any amin'ny firenena na tanàna dia somary sarotra, tsy manahy, mahafantatra ny toerana tsara indrindra 5 toeram-pizahantany any Espaina. Ireo tranonkala rehetra ireo dia mendrika hitsidika!
Fitiavana ny manomboka amin'ny renivohitr'ity firenena mahafinaritra ity, Madrid. Betsaka ny tranobe mitandahatra trano toy ny hoe mieritreritra fa niditra an-tsehatra ianao. Na dia mahagaga aza ny lapan'ny tanàna, miaraka amin'ny pinnacles fotsy sy ny endriny neo-Gothic. Fitsangatsanganana izay afaka manomboka amin'ny sarivongana lehibe ao amin'ny orsa ao amin'ny Puerta del Sol. Mandehana mamakivaky ny Palace Royal mahafinaritra alohan'ny hiditra ao amin'ny hatsaran'ny natioran'ny Retiro Park, ary mitsidika ny iray amin'ireo tranom-bakoka maro ao an-tanàna
BARCELONA, dia manana onjam-panentanana surrealism, izay mety. Rehefa miditra ao amin'ny Tempolin'ny Fiangonan'ny Masina Masina ianao dia manana fahatsapana ny mandeha amin'ny lafiny hafa amin'ny fitaratra; fitsangatsanganana izay afaka manohy ny fitsidihana an'i Parc Güell.
Aorian'izay isika dia mila an'i MALLORCA, nosy nofinofy, amin'izao fotoana izao dia toerana manan-danja mpizahatany any amoron-dranomasina ho an'ny fetin'ny herinandro masina. Ary aza manahy raha tonga amin'ny sekoly ambaratonga fototra ianao, misy soso-kevitra maro ho an'ny vahoaka madinika. Ny lanilanitra sy ny liona dia mampiseho an'i Marineland Mallorca ary ny torapasika ho an'ny ankizy dia misarika fianakaviana
Tenerife ao amin'ny Nosy Canary dia anisan'ity tendrony 5 ity, eto El Teide, ny tampon'isa ambony indrindra any Espana, ary ny toeram-ponenana malaza any Los Gigantes. Ireo mpitsidika dia mazàna ankehitriny mahita ireo vorona tropikaly any Loro Parque, ny Tenerife Zoo Monkey Park ary ny volkano volkano ao amin'ny valan-javaboarin'i Las Cañadas del Teide.
Ary, mba hanakatona dia tsy afaka ny hitady IBIZA ianao izay midika hoe "manararaotra mandra-pialanao" amin'ny Castile taloha. Ity fandinihana semantika ity dia mety tsy tena orthodox, fa io nosy io dia anisan'ny toerana mahafinaritra indrindra any Eoropa. I Ibiza dia manam-pahaizana mihoatra ny 160 km amin'ny morontsiraka sy ny strand 50 sasany, ankoatr'ireo feno trano fisotroan-dronono, trano fisakafoanana, hetsika rano, ary mazava ho azy, club clubs. Manaova toerana ho an'ny kolontsaina ary tsidiho ny tanànan'i Ibiza manan-tantara, voaroin'ny UNESCO.
Raha mbola tsy fantatrao ary tsy fantatrao hoe iza no tokony hitsidihanao, dia manoro zavatra iray izahay: tsidiho ry zareo ALL! Tsy afaka ny tsy hitia ny iray amin'izy ireo ianao, miandry anao izy ireo. Ary tsarovy ny hikarakarana azy ireo mandritra ny fijanonanao, miankina aminao ny faharetanao.
Espaina miandry anao!
Ny toerana 5 tsara indrindra mba hitsidika an'i Espaina! Jolay 8th, 2018frander
Minibus ho an'ny hofan-trano any madrid, Fihaonana, fampakaram-bady, fialzells, mora
Sticky Post By Fampiofanana mpampiofana On 18 / 03 / 2018
Minibus ho an'ny hofaina any madrid, inona no azoko atao amin'ny iray?
ny minibus ho an'ny hofaina any madrid Izy ireo no iray amin'ireo fomba tsara indrindra entina mitondra ny mpandeha; Any Torres dia manolotra anao ny tsara indrindra vidin'ny. Manitsy ny zavatra ilainareo izahay ary mamindra ny vondrona misy anareo na aiza na aiza misy anareo; avy amin'ny dian-tongotra haingana fitsangatsanganana hatramin'ny iray Fialan-tsasatra manontolo andro toy ny hoe a famindrana manokana na a fampakaram-bady.
Ny tena nangatahan'ireo mpanjifantsika dia ny fanangonana ao amin'ny Madrid Adolfo Suarez Barajas Airport ary ny famindrana azy any afovoan-tanànan'i Madrid sy ny fifehezana amin'ny tranga sasany. minibus ho an'ny hofaina any madrid na ny bisy; Vahaolana tonga lafatra amin'ny toe-javatra maro mitranga eo amin'ny fiainana andavanandro; Na izany aza, dia tsy safidy foana izay raisina.
Ho an'ny olona maro, ny zavatra rehetra tsy momba azy fitateram-bahoaka ao anaty fiaranao; latsaka kely izany fiara fitateram-bahoaka, fiaramanidina na fiaramanidina; miala amin'ny fahafahana tena azo atao sy mora azo, toy ny iray izay mihevitra ny minibus ho an'ny hofaina any madrid.
Fivarotana madinidinika amin'ny madrid: Ny vahaolana amin'ny olana
Alaivo sary an-tsaina hoe vondrona tanora mandray anjara matetika amin'ny fifaninanana fanatanjahan-tena amin'ny faritra; toy ny baolina kitra ary ny ray aman-dreniny no miandraikitra ny hitondra ny ankizilahy sy ankizivavy ho any amin'ireo mponina; izay tsy maintsy hanohitra ny fihaonany. Isaky ny misy ray aman-dreny mampisambotra azy dia misy olana izay tsy ahafahany mihetsika; Izany dia mamarana ny famindrana ity olana ity ho an'ny vondrona iray manontolo; izay mahita tampoka fa ny ankizy sasany dia mila mitady fomba hafa ahatongavana any amin'ilay toerana.
Miaraka amin'ny Rentrée de minibus Ity olana ity dia hovahana am-pahamendrehana. Ny vidin'ny solika ho an'ny tsirairay amin'ireo mpamily tsy tapaka dia tsy hiovaova be amin'ny fanajana ny vidin'ny minibus, izany koa, Mampita ny ankizy rehetra ao anaty vondrona ary tsy miankina amin'ny toe-javatra manokana amin'ny olona samihafa 4 na 5. Raha misy tranga toy izany, mitovy fiara fitaterana bus ao Madrid miaraka amin'ny fifanarahana de Rentrée minibuses dia haniraka fitateram-bahoaka alternative, izay manafoana ny ahiahy sy ny hetsika tsy ampoizina.
Ohatra mitovy amin'izany no mety hitranga amin'ny toe-javatra tsy hita isa. Rentrer minibus Tsy izany fitaovam-pitaterana lafo, ary mitondra tombontsoa bebe kokoa noho ny tsy fahampiana. Rehefa maminavina ny fitaovan'ny fitaterana ho an'ny vondrona, aza mametra ny tenanao amin'ny fomba mazava indrindra, azonao atao ihany koa ny mifidy Manofa bus miaraka amin'ny mpamily iray ao Madrid na Toledo.
Minibus ho an'ny hofan-trano any madrid, Fihaonana, fampakaram-bady, fialzells, mora Martsa 19th, 2018Fampiofanana mpampiofana